Soshiki Karate 組織 空手 (松濤館) ကရာတေး: ကိုယ်ခံပညာ သင်ဖို့၊ တတ်ဖို့ လိုပါတယ် by- Myoma Myint Kywe ဆိုရှိကိ ကရာတေးအသင်း နည်းပြချုပ် ဦးမြင့်ကြွယ် ( မြို့ မ မြင့်ကြွယ် )
ကိုယ်ခံပညာ သင်ဖို့၊ တတ်ဖို့ လိုပါတယ်
ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော ကိုယ်ခံပညာရပ်များအနက် ကရာတေးပညာသည် လွန်စွာထင်ရှားလှသည်။ အိုကီနာဝါကျွန်းနှင့် ဂျပန်ပြည်မှ အခြေခံပေါ်ထွန်းလာခဲ့သော ကိုယ်ခံပညာရပ်ဖြစ်ပြီး လူကြီးလူငယ်မရွေး၊ ယောင်္ကျားမိန်းမ မရွေး လေ့ကျင့်သင်ယူနိုင်သော အားကစား (sport) နှင့် တိုက်ပွဲဝင်စစ်ပညာ (combat martial arts) ပေါင်းစပ်ထားသော လက်နက်မဲ့ကိုယ်ခံပညာတစ်ရပ်လည်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်မှာ ဂျပန်တို့၏ ကရာတေးပညာရပ်သည် ဂျပန်ပြည်၌သည်ပင် ယနေ့အခါ လွန်စွာခေတ်မစားတော့ချေ။
ကျွန်တော် သည်၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် ဆိုရှိကိ ကရာတေးအသင်း ၏ တည်ထောင်သူ နှင့် နည်းပြချုပ် (founder and chief instructor Soshiki Karate Club) ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှိုတိုကန် ကရာတေး (Shotokan Style) ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၀-၁၉၈၁ ခုနစ်တွင် ကျွန်တော် ရေးသားပြုစုခဲ့သော ကရာတေး Thesis: Kihon (基本), Kata (型 or 形), Kumite (組手) " The3Ks process of Karate" အား ဂျပန်ကရာတေးအသင်း (J.K.A) ၏ နည်းပြချုပ် ဆရာကြီး မာဆာတိုရှိ နာကာရားမား က အသိမှတ်ပြု လက်ခံခဲ့သည်။ ဂျပန် ကရာတေး အသင်း Japan Karate Association (日本 空手 協会; Nihon Karate Kyokai ) မှ ကရာတေး နည်းပြဆရာ အဖြစ်အသိမှတ်ပြုခဲ့သည်။
ကျွန်တော် သည် ၁၉၈၇ မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း စင်ကာပူ၊ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်၊ ဂျာမနီ၊ ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ တောင်ကိုရီးယား၊ နယ်သာလန် စသော နိုင်ငံများသို့သွားရောက် ခဲ့သည်။ သင်တန်းများ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သင်တန်းများလည်း ပို့ချခဲ့သည်။
ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ လူငယ်များအား ကရာတေးပညာ သာမက ဗုဒ္ဓဘာသာ ၊ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ ကရာတေးအက်သစ် (Ethics of Karate) စသည် တို့ကိုလည်း စာတွေ့လက်တွေ့ ပူးတွဲပို့ချပေးခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ (၁၉၀) ကျော်တွင်၊ လူဦးရေ (သန်း ၇၀ ကျော်)သည်လက်နက်မဲ့ ကရာတေးကိုယ်ခံပညာရပ်ကိုလေ့ကျင့်နေကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ ကရာတေး ကလပ်များတွင် အများအားဖြင့် အဖြူ၊ အဝါ၊ အစိမ်း၊ အညို၊ အနက် ဟု ခါးပတ် Level အရောင်ကို အနိမ့်မှ အမြင့်သို့ (၅) ဆင့် သတ်မှတ်လေ့ ရှိကြသည်။ သို့သော်လည်း အချို့သော ကရာတေး ကလပ်များတွင် အဖြူ၊ အဝါ၊ လိမ္မော်၊ အစိမ်း၊ အပြာ၊ အညို၊ အနက် ဟူ၍ ခုနှစ်ဆင့် သတ်မှတ်လေ့ ရှိကြသည်။
သာ ပြု မူနေပါက ထိုသူများသည် ကရာတေး နှင့် မထိုက်တန် ဟု နားလည်ရပါမည်။
1. မှန်ကန်ပြီး စနစ်ကျသည့် လေရှူရှိုက်မှု(濃度と呼吸 breathing)၊
ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်း(トレーニング の理論と実践 Training with theory and practical)၊
8. ယဉ်ကျေးခြင်း(礼儀 Courtesy )
10. တရားထိုင်ခြင်း(黙想 Concentration and Meditation) တို့ ဖြစ်သည်။
ကရာတေး (karate) တွင်ပါသော ခရ (kara) သည် လက်ထဲတွင် တစ်စုံတစ်ရာ မပါပဲ ဗလာ သက်သက်ဖြင့် ရန်သူကို ခုခံတိုက်ခိုက်ရသော ကိုယ်ခံပညာဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသော်လည်း အမှန်စစ်စစ် (kara) ၏ မူလရည်ရွယ်ချက်သည် လူတို့တွင် ရှိကြသော လောဘ (Greed)၊ ဒေါသ (Anger)၊ မောဟ (Ignorance)၊ မာန (Conceit and Arrogant)၊ အမုန်းတရား (Hatred) စသော မကောင်းမှု မျိုးစုံများ မရှိအောင်၊ မဖြစ်အောင် မိမိစိတ်ကို ဗလာ (empty) ထားရမည်ဟုဆိုသည်။ ကရာတေး (karate) တွင်ပါသော ခရ (kara) သည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူခဲ့သော Sunyata ၏ အခြေခံသဘောတရားတစ်ခုအဖြစ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်ဟု ပညာရှင်တစ်ချို့က ဆိုခဲ့သည်။ စိတ်ကို မကောင်းမှု မျိုးစုံ တို့ကို မတွေးအောင်-မရှိအောင်၊ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရင် ဗလာဖြစ်အောင် ထားပါ ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်များ ပါရှိသည်။ ပြောဆိုလေ့ရှိပါသည်။ “Sunyata" ("zero, nothing") is usually translated as "emptiness".
· မည်သည့် နည်းစနစ် ကို မည်သို့သုံးခြင်းက အထိရောက်ဆုံးဖြစ်မည်နည်း.....!
· မျိုးဆက်သစ် ကရာတေး လူငယ်များကို စစ်မှန်သော ကရာတေး နည်းစနစ်များ၊ ကောင်းမွန်သော အတွေးအခေါ်၊ အမူအကျင့်နှင့် ethics of Karate တို့ကို မည်သို့ လက်ဆင့်ကမ်း Handover, the process of transferring လုပ်ဆောင်ပေးမည်နည်း....! စသည့် အချက်များသည် ယနေ့ခေတ် ကျွန်တော်တို့ ကရာတေး ဆရာများ ကိုယ်ခံပညာရှင်များ အလေးထားစဉ်းစားလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များဖြစ်သည်။ ကရာတေး
ပညာရေး နှင့်ပတ်သက်၍ အလေးထားစဉ်းစားရမည့် အချက်များ ဖြစ်သည်။
"ဆရာကြီး"ဟုလည်းကောင်း လေးလေးစားစား ခေါ်ဆိုလေ့ရှိသော်လည်း ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ကမူ မိမိကိုယ်မိမိ ဆရာကြီးတစ်ဦးဖြစ်သည်ဟု မခံယူလိုပါ။ “先生 Sensei ဆရာ”တစ်ဦးဖြစ်သည် ဟုသာခံယူလိုပါသည်။ “先輩 (senior student)” တစ်ဦးဖြစ်သည် ဟုသာခံယူလိုပါသည်။ အကြောင်းမှာ ကရာတေးပညာရပ်သည် လွန်စွာနက်ရှိုင်းကျယ်ဝန်းသောကြောင့် နှစ်ပေါင်း ၄၀ သာမက နှစ်ပေါင်း ၈၀-၁၀၀ တိုင်အောင် သင်ကြားလေ့ကျင့်စေကာမူ ပြီးပြည့်စုံသည်ဟု မရှိချေ။
မှတ်ချက် ။ ။ JKA မှ ကရာတေးဆရာကြီး Funatoshi Gichin နှင့် Masatoshi Nakayama တို့၏ တပည့်အရင်းဖြစ်သူ နာမည်ကျော် ကရာတေးပညာရှင် Kanazawa (b. 1931) သည်ပင် ၂ နှစ်အတွင်း black belt 1st dan (Shotokan Karate) ရခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းများ တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ Shihan Hirokazu Kanazawa promoted to the rank of 1st dan in Shotokan karate less than two years of training in the art.
ထူးချွန်မှု-ညံ့ဖျင်းမှု၊ ရက်မှန်မှု ရက်ပျက်မှု၊ လေ့ကျင့်ချိန်များပြားမှု-လေ့ကျင့်ချိန်နည်းပါးမှုစသော အချက်များပေါ်တွင်လည်း မူတည်၍ တစ်ချို့ဆိုရင် ၄ နှစ်မတိုင်မီ ခါးစည်းအနက် ရရှိသူ ရှိသကဲ့သို့ တစ်ချို့ဆိုရင် ၄ နှစ်ကျော်-၅ နှစ်မှ ခါးစည်းအနက် ရရှိသူများလည်း ရှိပေသည်။
ရာပေါင်းများစွာသော တပည့်များနည်းတူ ကျွန်တော်၏ သမီး ၂ဦး (သော်တာဝင်း၊ စုစုစံ) တို့ကိုလည်း၂၀၀၉ခုနှစ်-၂၀၁၃ခုနှစ်အထိ Four-Year Graduation Program စာတွေ့လက်တွေ့ (၄နှစ်) သင်ကြားပြီးမှ (Black Belt Tests (oral examinations and written tests) စာမေးပွဲကို Thesis papers နှင့်တကွ တိတိကျကျ စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ သမီးများဆိုပြီး မျက်နှာမလိုက်ခဲ့ပါ။သမီး၂ဦးသည်စာတွေ့လက်တွေ့ထိုက်ထိုက်
တန်တန်ဖြေဆိုအောင်မြင်သည့် အတွက်ကြောင့် တစ်ခြားတပည့်များနည်းတူ
Graduate Diploma in Karate ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ပေးအပ်အသိမှတ်ပြုခဲ့ပါသည်။ တကယ်အောင်မြင်မှသာ Dan grade ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
သမီးအရင်း၂ဦး ပင်ဖြစ်လင့်ကစား ကရာတေးလေ့ကျင့်ချိန်၊ သင်တန်းချိန်တို့တွင်လည်းကောင်း၊ ကရာတေးပညာနှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ္စများတွင်လည်းကောင်း တခြားတပည့်များနည်းတူ ဆရာ-တပည့် ပုံစံဖြင့်သာ တိတိကျကျ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောဆိုဆက်ဆံသင်ကြားခဲ့ပါသည်။ Intensive training များ၊ combat training များ၊ အတိအကျ လေ့ကျင့်စေခဲ့ပါသည်။ စည်းကမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူ့ကိုမျှ ကျောသားရင်သားမခွဲခြားခဲ့ပါ။ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ အင်တာနက်မှဖြစ်စေ၊ Facebook မှဖြစ်စေ ကရာတေး၏တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်း topic များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုများ (debate and discuss) အား လွတ်လပ်စွာပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အမှန်တရားကို အခြေခံသော criticize ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်း၊ အမြင်ခြင်းဖလှယ်ခြင်း၊ အားသာချက် အားနည်းချက် ချိန်ညှိခြင်း၊ လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်းတို့သည် ကရာတေးပညာရပ်အတွက်သာမက မည်သည့်အတတ်ပညာတွင်မဆို မဖြစ်မနေလိုအပ်သော အခြေခံလိုအပ်ချက်များ ဖြစ်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ discuss and debate လုပ်ရာတွင် ယဉ်ကျေးသောပညာရှင်များ ရှိသကဲ့သို့ ကြမ်းတမ်းခက်ထန်သော ပညာရှင်တစ်ချို့ရှိကြောင်း၊ ပညာပြည့်ဝသော ပညာရှင်များရှိသကဲ့သို့ နည်းနည်းသိပြီး များများပြောချင်သော နည်းစနစ်အမှန်များကိုသည်ပင်လျှင် နားလည်တတ်ကျွမ်းခြင်းမရှိသော အတုအယောင်ပညာရှင်များရှိကြောင်း တပည့်များမှတစ်ဆင့် ကြားသိခဲ့ရသည်။ ဤကဲ့သို့သော ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းပြီး မောက်မာလှသော တတ်ယောင်ကား ပညာရှင်အချို့ကြောင့် စစ်မှန်သော ကရာတေးပညာရပ်အတွက်သာမက အဆိုပါ (ခက်ထန်မောက်မာပြီး လူတတ်ကြီးလုပ်နေသော) ထိုပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပါ လွန်စွာရင်လေးလှသည်။ မိမိညံ့သည်ကို ညံ့သည်ဟုသိသော လူညံ့တစ်ဦးသည်ပင် ထိုသို့အမှန်ကိုသိသောစိတ်ကြောင့် အမြင်မှန်ရပြီး လက်တွေ့ကြိုးစားလျှင် တစ်နေ့တွင် လူတော်တစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်သည်ဆိုသော ဆိုရိုးစကားကို သတိရမိသည်။ မိမိမှားသည်ကို မှားသည်ဟုသိသော လူတစ်ဦးသည်ပင် ထိုသို့အမှန်ကိုသိသောစိတ်ကြောင့် အမြင်မှန်ရပြီး လက်တွေ့ကြိုးစားလျှင် တစ်နေ့တွင် မှန်ကန်သောလူသားတစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်သည်ဆိုသော ဆိုရိုးစကားကိုလည်း သတိရမိသည်။ သို့ရာတွင် မိမိမှားသည်ကို မှားသည်ဟုမသိသည့်အပြင် အမှန်ကို သိအောင် မကြိုးစားပဲ ဆက်လက်မှားယွင်းနေမည်ဆိုပါက ထိုသူသည် အမှားဘဝက လွတ်မည်မဟုတ်။ တစ်နည်းဆိုရသော် တစ်သက်လုံးမှားနေမည် ဖြစ်သည်။ မိမိညံ့သည်ကို ညံ့သည်ဟုမသိသည့်အပြင် တော်အောင်၊ ထူးချွန်အောင် မကြိုးစားပဲ ဆက်လက်ညံ့ဖျင်းမြဲ ညံ့ဖျင်းနေမည်ဆိုပါက ထိုသူသည် အညံ့ဘဝက လွတ်မည်မဟုတ်။ တစ်နည်းဆိုရသော် တစ်သက်လုံးညံ့နေမည်သာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ အရေးကြီးသည်မှာ မိမိကိုမိမိ သိနားလည်ဖို့ပင် ဖြစ်သည်။ အမှန်-အမှားကိုသိပြီးပါကလည်း အမှားကိုရှောင်ပြီး အမှန်ကို လိုက်နာကျင့်ကြံဖို့ အရေးကြီးသည်။ အကောင်းနှင့်အဆိုးသည်လည်း ထိုနည်းတူပင်ဖြစ်သည်။ မှားယွင်းမှု ဆိုးသွမ်းမှုများကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး မှန်ကန်မှု ဖြောင့်မှန်မှုများကို လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်ကြံဖို့ အရေးကြီးလှသည်။